Minions na akwụkwọ ahụ aja, budata ha maka gị Android | Gam akporosis
Ndị Minions bụ kpakpando zuru oke na Gru's Dispicable Me na ndị odide a na-ahụ n'anya nwere fim ha. Ọ bụrụ na Minions na-amasị gị, ị ga-ahụ akwụkwọ ahụaja ndị anyị hụrụ na ngalaba a. Maka na ị nwere nnukwu nhọrọ akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo na-egosipụta ihe odide ndị a mara mma.
Gbanwee ihuenyo ekwentị gị na akwụkwọ ahụ aja ndị a, nke na-eme gị ọnụ ọchị oge ọ bụla ị hụrụ ha. Pụrụ ịhụ ihe niile ego na-dị na gallery n'okpuru.
Budata nke kacha mma minions na akwụkwọ ahụ aja, mara ezigbo mma odide si Dispicable Me ndị ugbu a nwere onwe ha nkiri na ndibọhọ onye ọ bụla obi ha antics. Tinye minion na mkpanaka ma ọ bụ mbadamba gam akporo gị.
You chọrọ karịa mbadamba mbadamba ka o bu ekwenti? Na njikọ nke anyị hapụrụ, ị ga-ahụ ha.